Wasiir Dubbe " Shirka uu madaxweyne Farmaajo iclaamiyay wuxuu ka dhici doonaa teendhada Afisyooni".
Axmed Madoobe oo ka digay dagaal uu Farmaajo ka abaabulayo gobolka Gedo.
Farmaajo oo markii 4aad ku baaqay shir siyaasadeed.
Saciid Deni oo shuruudo adag ku xiray ka qeybgalka shirka uu Farmaajo ku baaqay.
Saciid Deni oo ka shifay sir ku saabsan hagardaamada siyaasadeed ee uu Farmaajo ladamacsanyahay maamul goboleedyada [Warbixin].